किन थुप्रिएका छन् प्रयोगशालामा सयौं स्वाब ? | संस्कार एफ.एम. ९५.६ मेघाहर्ज
Home Uncategorized किन थुप्रिएका छन् प्रयोगशालामा सयौं स्वाब ?
किन थुप्रिएका छन् प्रयोगशालामा सयौं स्वाब ?
Posted By: sanskar fmon: २१ जेष्ठ २०७७, बुधबार ०४:३९ In: Uncategorized
१ जेठ, कलैया । सर्लाहीको कविलासी नगरपालिकाले अगरवा माध्यमिक विद्यालयको क्वारेन्टिनमा रहेका ५५ जनाको जेठ ११ गते नै स्वाब संकलन गरेर पठायो । तर, स्वाब पठाएको ८ दिनपछि १९ गते मात्र रिपोर्ट तयार भयो । ५५ मध्ये ३६ जनाको पोजेटिभ रिपोर्ट आयो । त्यसबेलासम्म संक्रमित र अरु एकै ठाउँ बसिरहेका थिए ।
अब उनीहरु सबैको फेरि पीसीआर टेष्ट गराउने हो भने रिपोर्ट आउन कति दिन लाग्छ, टुंगो छैन । त्यसैले आरडीटी गरेर हेर्दा तीनजनाको पोजेटिभ आयो । उनीहरुलाई राखेर अरुलाई घर पठाइएको मेयर कैलाश किशोर यादव बताउँछन् ।
दैलेखका क्वारेन्टिन भारतबाट घर फर्किएका मानिसहरु भरिइसके । तर, सुर्खेत र जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पठाएको स्वाबको रिपोर्ट आएको छैन । ९÷१० दिनसम्म स्वाब होल्ड हुँदा क्वारेन्टिनमा सँगै बसेकाहरु संक्रमित हुन थाले ।
भारतबाट थप आएका मानिसहरुलाई क्वारेन्टिन गर्ने गाउँ पनि भएन । त्यसैले जिल्ला सीसीएमसीले पीसीआरको साटो क्वारेन्टिनमा बसेकाहरुको आरडीटी टेष्ट गर्ने र घर पठाउने निर्णय गरेको छ ।
बाराका ७० वर्षीय पुरुष दीर्घ श्वास प्रश्वाससम्बन्धी समस्याले जेठ २ गते नेशनल मेडिकल कलेजमा भर्ना भए । आईसीयूमा भर्ना भएका उनको भोलिपल्टै स्वाब संकलन गरियो । तर, उपचारका क्रममा उनको ४ गते मृत्यु भयो । तर, कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट भने दाहसंस्कार भएको ९ दिनपछि १२ गते मात्र आयो । नारायणी अस्पतालमा परीक्षण गर्दा शंकास्पद भेटिएपछि स्वाब राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, टेकु पठाइएको थियो ।
यसरी कोरोना परीक्षणका लागि स्वाब संकलन गरेको एक साता वा सोभन्दा बढीमा रिपोर्ट आउनु सामान्य बनेको छ । जनस्वास्थ्य विज्ञहरु भने यसले गम्भीर संकट निम्त्याउने बताउँछन् ।
स्वाब होल्ड हुनुका तीन कारण
राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका अनुसार अहिले प्रत्येक ल्याबमा २०० देखि ५०० थ्रोट स्वाब होल्ड भएको छ । तर, परीक्षण औसतमा १ सय हाराहारी छ । यसरी हेर्दा सयौं स्याम्पल एक साताभन्दा बढी प्रयोगशालामै होल्ड हुने देखिन्छ ।
‘देशभरका २० वटा ल्याब पूर्ण क्षमतामा चलाउँदा पनि बढीमा दैनिक चार हजारभन्दा बढी परीक्षण गर्न सकिन्न । जब कि अहिले नै दैनिक ५ हजार बढी नमूना संकलन भइरहेको छ’ नाम नबताउने शर्तमा प्रयोगशालाका एक वैज्ञानिक भन्छन्, ‘देशभरका ल्याबमा केही जनशक्ति र अतिआवश्यक उपकरण थप्न सक्यो भने परीक्षणको स्पिड थोरै मात्रामा भन्दा बढाउन सकिन्न ।’
डाक्टर रुना झा
राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकी निर्देशक डाक्टर रुना झा भने प्रयोगशालाहरुमा धेरै स्याम्पल होल्ड हुनुका मुख्य तीनवटा कारण रहेको बताउँछिन् ।
पहिलो— गाइडलाइन फलो नगरी स्वाब संकलन गर्नु ।
दोस्रो— प्राथमिकता निर्धारण नगरी एकै ठाउँमा स्वाब पठाउनु ।
तेस्रो — पुल टेष्टिङ रोकिनु ।
डाक्टर झाका अनुसार सम्भावित संक्रमित र उनीहरुको सम्पर्कमा आएका मानिसको एकैपटक स्वाब संकलन भएको छ । यसरी गाइडलाइन फलो नगरी यसरी स्वाब संकलन गर्दा रिपोर्ट पोजेटिभभन्दा नेगेटिभ बढी आएको उनी बताउँछिन् । अन्धाधुन्ध स्वाब संकलन गरेर परीक्षण गराउँदा सही रिजल्ट नआउने मात्र होइन, समय र स्रोतको समेत दुरुपयोग हुने उनको तर्क छ ।
‘स्वाब नै नलिने भनेको होइन, तर लक्षण देखिएका र लक्षण नदेखिएकाहरुको छुट्याएर पठाएको भए सहज हुन्थ्यो’ उनले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘अन्धाधुन्ध स्वाब संकलन गरेर पठाएकाले प्राथमिकतामा कुन स्याम्पल छ भन्ने जानकारी नै हामीलाई हुँदैन । यसले पनि समस्या भयो ।’
प्राविधिक कारणले पनि स्वाब होल्ड हुने गरेको छ । कतिपय अवस्थामा स्याम्पल लोड गरिसकेपछि मेसिन जाम हुन्छ र रिपोर्ट आउन ४/५ घण्टा ढिलो हुने भन्दै उनले भनिन, ‘स–साना प्राविधिक कारण र धेरै स्याम्पल एकैपटक आएकाले केही नमुना होल्ड भएको हो । अब स्वाब संकलन र परीक्षणको सन्तुलन मिल्छ ।’
डाक्टर झाका अनुसार एक साताअघिसम्म टेकु प्रयोगशालामा दैनिक २ हजारभन्दा बढी स्याम्पल आउथ्यो । तर, अहिले त्यो क्रम घटेर दैनिक ७ सयमा झरेको छ । यसले स्याम्पल होल्ड हुने क्रम घटेको छ । देशभरका अन्य ल्याबले पनि परीक्षणको गति बढाएको उनको दाबी छ । ‘गएका केही दिन देशभरका ल्याबमा केही दिन स्याम्पल होल्ड भएको हो । अब स्याम्पल आउने क्रम घट्दैछ तर, हाम्रो टेष्ट घटेको छैन’ उनी भन्छिन्, ‘देशभरका ल्याबहरुले क्षमता अनुसार परीक्षण गरिरहेका छन्, अब सन्तुलन मिल्छ ।’
मौद्रिक नीतिको गृहकार्यमा राष्ट्र बैंक, असार अन्तिम साता आउने